Francisco Isco Oo Seegi Kara Kulanka Lugta Labaad Ee Champions League – Gool FM
(Real Madrid) 26 Abriil 2018 Tababaraha Faransiiska ah ee kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa la kulmay war aan wanaagsaneen kadib guushii ay sida dirqiga ah kaga gaareen kooxda Bayern Munich 2-1,kulankii lugta koowaad ee wareega afar dhamaadka tartanka UCL.
Wargeyska “AS” ee dalka Spain kasoo baxa ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in Isco uu dhaawac kasoo gaaray garabka bidix, kadib markii ay si xoogan isugu dheceen Jérôme Boateng inta uu socday kulankii Bayern iyo Real Madrid, qeybtii hore ee ciyaarta, taasoo keentay in Zidane uu ka saaro ciyaarta si uu u keensado Marco Asensio.
Francisco Isco ayaa tijaabada caafimaad mari doono bari oo Jimco ah, si loo ogaado heerka uu gaarsiisan yahay dhaawaciisa inkastoo dhamaan wararka ay sheegayaan inuu maqnaanayo kulanka Talaadada, Zinedine Zidane ayaana halis galin doonin xidigiisan hadii uusan diyaar u noqon kulanka soo aadan 100%.
Waxaa xusid mudan in Dani Carvajal uu seegi doono kulanka Bayern Munich ee Talaadada soo socota, iyo sidoo kale El Clásico ee kooxda Barcelona ee horyaalka La Liga, laakiin waxaa la filayaa difaaca reer Spain inuu diyaar noqon doono kulanka Finalka hadii ay Dhacdo in Real Madrid ay u soo gudubto.
Luka Modric oo saxiix wayn ka hor istaagaya Real Madrid suuqa xaggaaga